शुरुआती तरिका: - डिकोउपेज यो ... डिकोउपेज छ
आजको विश्व जहाँ सबै भन्दा कुराहरू monotonous छन्, म केही व्यक्तिगत र अद्वितीय हुन चाहन्छु। आज विभिन्न तरिकाहरू र बुनाइ को प्रकारका मार्गदर्शन काम असामान्य काम कुनै पनि नमूना र एक मानक कुरा परिवर्तन गर्न सक्ने छन्। डिकोउपेज रूपमा सजाने को यो पुरानो र बरु सरल प्रविधी जस्तै धेरै मान्छे। यो भनेर कलात्मक पेन्टिङ बहाना गर्न अनुमति दिन्छ वस्तुतः कुनै पनि सामाग्री बनाइएका वस्तुहरु को सतह सजाने को एक विशेष तरिका हो।
हरिताश्म वा कला?
शब्द कट "" डिकोउपेज »(डिकोउपेज) फ्रान्सेली र अर्थ रूसी भाषामा अनुवाद छ"। प्लास्टिक, काठ, ग्लास, कपडा वा धातु: यसरी, यो वस्तुतः कुनै पनि सतहमा कार्यान्वयन अनुप्रयोगहरूको विविधता छ। काम तपाईंले देख्नुभएको छ संभावना छ, यो प्रविधी मा बाहिर, तर नाजुक चित्रित vyrezkovoy वा पुछ्ने डिकोउपेज सबै शोभा सिर्जना गर्न अनुमति दिएको छ कि संग सजाया चित्र फ्रेम, सजावटी मूर्तिहरु र फर्नीचर चित्रित कि अनुमान थिएन। यो लगभग सार्वभौमिक जो कोहीले, अद्वितीय टुक्रा सिर्जना गर्न सक्छौं जो पनि छैन मानिस अनुमति दिने, लाउने को बाटो। विशेष देखि एक मनपर्ने तस्वीर चयन डिकोउपेज कार्ड, कागज पट्टियां वा पत्रिका बाट, साथै अन्त मा, जस्तै craquelure, रंग र टिन्टिङ, Greening र अन्य रूपमा आफ्नो विशेष प्रविधी elaborating, तपाईं जडना को धेरै plausible अनुकरण वा चित्रकला को कला सजिएको यो कुरा प्राप्त गर्न सक्छन्।
एक सानो इतिहास
प्रविधी कागज सजावट आवेदन र XII शताब्दीमा पहिले नै आफ्नो घरमा प्रयोग दैनिक वस्तुहरु, चिनियाँ किसान। तर XVII-XVIII शताब्दीयौंदेखि मा युरोप मा पुग्यो सजावट यो विधि को लोकप्रियता, को शिखर जब वोग लाह फर्नीचर र घरेलू वस्तुहरू जापान र चीन मा गरे। कारण यातायात लागत को rarity र जटिलता धेरै महंगा छ, तर स्थानीय कारीगरों सस्ता फर्नीचर को उत्पादन सुरु गर्न सक्षम थिए। तिनीहरूले प्राच्य रूपांकनों र ढाँचाको, साथै प्रयोग गरेका छन् यो के गर्न कला काम, वस्तु को सतह तिनीहरूलाई टाँस। यो एक वास्तविक जापानी वा चिनियाँ कुरा जस्तो बनाउन, आफ्नो सतह varnished धेरै पटक हो। राम्रो चाँडै युरोप भरि र बेलायत मा फैलाउन यो प्रविधी त्यहाँ डिकोउपेज मालिकको वास्तु तत्व, परिदृश्य र विभिन्न अरूको पारंपरिक कोठा तस्बिरहरू को पर्खालहरु सजाउनु। मुद्रण कोठा - यो घटना पनि एक विशेष नाम आविष्कार।
विक्टोरियन बेलायतमा डिकोउपेज प्रविधी परिवर्तन - सट्टा युरोपेली शहर र वास्तुकला masterpieces छविहरू एक अस्तव्यस्त फेसनमा रंग चित्रहरू, मूर्तिहरु cupids र स्वर्गदूतहरूको संयोजन समावेश छ। पहिलो पटक समाज को सबै भन्दा विविध सामाजिक strata लोकप्रिय डिकोउपेज हुन्छ कि त, बाहिर कटौती गर्न तस्वीर को सस्ती कागज विशेष संग्रह मुद्रण को व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुन्छ। यो शौक चाँडै एकदम अन्य युरोपेली देशहरूमा सुशील भयो।
तपाईं के सजाउनु गर्न सक्नुहुन्छ?
पहिले समयमा प्रायजसो प्रयोग आवेदन यस्तो प्रविधी काठ बक्स, एल्बम, उपहार बक्स र विभिन्न प्यारा महिला हृदय सामान सजाने, तर आज तपाईं डिकोउपेज प्रविधी मा लगभग कुनै पनि कुरा सजाउनु गर्न सक्नुहुन्छ। रचनात्मक tosses जीवन नै तरिका: को नर्सरी वा देशमा एक नीरस फर्नीचर; सादा काटन बोर्ड र ट्रे, किसमिस बिना प्लेट र vases, विभिन्न वस्तुहरू प्लास्टिक को गरे। यो प्रविधी मा, तपाईं पनि एक रात दीपक, आफ्नो मनपर्ने जूता वा झोला लागि वतीको ढक्कन सजाउनु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं अद्वितीय वस्तुहरू र कुराहरू मात्र एक अद्वितीय भित्री गर्न भनेर सिर्जना गर्ने, घर को लागि डिकोउपेज प्रविधी प्रयोग गर्न सक्छन् तर पनि रूपमा सेवा गर्नेछन् राम्रो मुड को स्रोत :
दर्पण, combs, आभूषण लागि बक्स, trinkets लागि दराज को छाती;
एल्बम, कागजात, डायरीहरू, पर्स र kupyurnitsy, नोटबुक र पेन्सिल धारकहरुको लागि कवर डेस्क आफूलाई सेट र तिनीहरूलाई अन्तर्गत खडा;
बोतल, रक्सी चश्मा र बोतल;
vases, सजावटी फ्रेम, मूर्तिहरु र कोस्टरस, घडीहरू, lampshades;
विभिन्न भान्सा वस्तुहरु: बर्तन र samovars, मीठो-बक्स, काटन बोर्ड र ट्रे, चिया घरहरू, मसला लागि कन्टेनर, कोस्टरस तातो, रोटी डिब्बे।
आभूषण - कान को बाली, पेंडेंट, छल्ले र कंगन;
धनी कपडा पर्दे, tablecloths र bedspreads खत्म र सजावटी तकियों देखि;
वस्त्र, बैग र जूता।
यसरी, वस्तुतः कुनै पनि कुरा कला मा डिकोउपेज सजाउनु गर्न सक्नुहुन्छ। विचार एक सजावटी कला यस प्रकारको एक ठूलो चासो लिन मात्र छ, आफूलाई प्रकट हुनेछ।
ऊतक चित्रकला को प्रकार
आधुनिक कला र शिल्प मा डिकोउपेज प्रविधी को निम्न आधारभूत प्रकार आवंटित निर्णय:
यी डिकोउपेज को प्रकार को सबै एक साधारण प्रविधि आधार मा आधारित छन् भन्ने तथ्यलाई बावजुद, प्रत्येक अन्य संग, तिनीहरूले धेरै भिन्न छन्। प्रत्येक सुविधाहरू मा एक संक्षिप्त नजर।
क्लासिक, सीधा वा डिकोउपेज
यस्तो सजावट छवि कार्य गर्दा, कट वा डिकोउपेज पोंछे वा विशेष कार्ड समान रूप र सजिलै वस्तु को तयार सतह देखि पालन देखि भताभुङ्ग। उत्पादन सतहमा टाँसिएको पछि वार्निश ढाकिएको जबसम्म तपाईँ एउटा चिल्लो र homogeneous बनावट प्राप्त नभएसम्म पलिश छ। रचनात्मक डिजाइन नमूना आधारमा थप, उदाहरणको लागि, kolirovan परिमार्जन हुन सक्छ, Tinted वा वृद्ध।
उल्टो डिकोउपेज - सजाने कुनै पनि पारदर्शी सतहहरु, सामान्यतया ग्लास को एक तरिका हो। यो प्रविधी प्रदर्शन गर्दा, मनसाय कार्य को अनुक्रम क्लासिक मा प्रदर्शन गर्दै छन् कि ती व्युत्क्रम छ भनेर, बाहिरी र उत्पादन को भित्री सतहमा चिपके छैन।
यो प्रविधी चित्रकला र मात्रा तत्व को सतह मा बनाउन सिमुलेशन को तत्व जोडती, यो मूर्तिकला reliefs नजिक छ। ऊतक, संरचनात्मक pastes र अन्य सामाग्री तपाईं विमान मा मात्रा सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।
कला (धुवाँ) प्रौद्योगिकी
कारण डिकोउपेज को यो फारम फरक प्रविधी र विधिहरू पूर्ण तार मनसाय र पृष्ठभूमि लागू प्रयोग भन्ने तथ्यलाई गर्न, वास्तविक कलात्मक पेन्टिङ एक पूर्ण र उच्च गुणस्तरीय अनुकरण प्राप्त।
चित्रकला यस प्रकारको पनि पुछ्ने वा pechvorkovym टाल्ने डिकोउपेज भनिन्छ। यो सतह हुन सजाया पूर्ण कागज टुकडे को एक किसिम संग, डिकोउपेज लागि पट्टियां प्रयोग गरी भरियो गर्न भन्ने तथ्यलाई कारण छ। परिणाम रजाई को एक अनुकरण छ। तपाईं कम रोचक छैन बाहिर dekopatcha लागि विशेष कागज, तर पनि साधारण पोंछे देखि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं यो सरल रुचि, तर निश्चित आकर्षक प्रविधी हो भने, हामीलाई तपाईं आफ्नो पहिलो डिकोउपेज बनाउन तयार गर्न आवश्यक के सामाग्री हेरौं। चरण द्वारा चरण यसलाई गरिन्छ कसरी, हामी पनि हेर्न।
सबै को पहिलो, तपाईंलाई आवश्यक:
वस्तुहरू वा सजावट लागि workpiece।
हामी योजना छन् कि तस्बिरहरू कुरा सजाने। यो डिकोउपेज लागि विशेष कार्ड फोटो, पत्रिका र समाचार पत्र देखि कतरन, कागज पट्टियां को सुन्दर रूपांकनों हुन सक्छ।
कैंची, धेरै आकार मा ब्रश र स्पंज, विभिन्न grits संग स्यान्डपेपर।
छवि कब्जा लागि गोंद। सामान्य भवन PVA र अधिक महंगा डिकोउपेज रूपमा उपयुक्त।
एक्रिलिक प्राइमरों, टाँसन र पेंट्स।
त्यो कसरी गरे?
यस प्रविधी एकदम सरल छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद नै डिकोउपेज कसरी गर्न विस्तृत वर्णन। लागि शुरुआती चरण द्वारा कदम यो सबै पछि वर्णन गरिनेछ।
यो उद्देश्यबारे राख्न योजना छ जो मा सतह सफा गर्न आवश्यक छ। काठ वा धातु को सतह, त्यसपछि यो राम्रो छ भने primed गर्न।
मनपर्ने तस्वीर ध्यान कटौती वा हटाउन वा कार्ड बाहिर आंसू हुनुपर्छ।
उद्देश्यबारे पलायन हुँदा सजिलो फेड हासिल गर्न बनाएर, कम स्पष्ट छन् कि यसलाई किनाराको। यो टियर सजिलै गोल सही खण्ड, अन्य रंग तह पोंछे अलग कि पानी प्रि-moistened सम्झना गर्नुपर्छ।
तपाईं धेरै शीर्षक प्रयोग गर्ने योजना भने तपाईं gluing सुरु गर्नु अघि, ती सबै तयार र सतह धारण गर्नुपर्छ। तस्वीरको इच्छित नियुक्ति प्राप्त, gluing गर्न अगाडि बढ्नुहोस्।
PVA गोंद पानी संग पतला एक सानो राम्रो छ, र त्यसपछि तिनीहरूलाई हामी अडिग कहाँ ठाउँ, र उल्टो पक्ष को नमूना चिकनाना।
धेरै ध्यान दिएर, सतह गर्न छविमा हस्तान्तरण र त्यसपछि बिस्तारै थिचेर, गोंद। अर्डर को गठन Folds र हावा बुलबुले हटाउन मा राम्ररी छवि अलिकति नम कपडा वा किनाराको गर्न बीचमा आफ्नो औंलाहरु ironed।
एक नैपकिन संग अतिरिक्त टास्ने हटाउन र छवि सुक्खामा यसलाई छोड्नुहोस्।
यदि पृष्ठभूमि र लागू मनसाय बीच सीमाहरु धेरै विशिष्ट प्रयोग धेरै पातलो, शून्य तथाकथित स्यान्डपेपर र धेरै सही किनारा भन्दा जानुहोस्।
त्यस अवस्थामा, तिमी अगाडी छवि रंग सजाउनु वा चमक थप्न चाहनुहुन्छ भने, यो वार्निश को एक पत्र संग कवर। यो सुक्खा भएपछि, यो लागू र अन्य सजावटी तत्व गर्न सकिन्छ।
त्यसपछि तिनीहरूलाई प्रत्येक पूरा सुकाउने लागि प्रतीक्षा, वार्निश को धेरै पत्रहरु विषयको ढाक्न आवश्यक छ।
पाठ DIY: बाल सदन मा प्राकृतिक सामाग्री देखि शिल्प। र मात्र ...
आफ्नै हात संग कपास डिस्क को सुन्दर दूत
उज्ज्वल वर्णमाला को महसुस गरे: आफ्नै हातले ढाँचा
ढाँचा बाल Hooded जैकेट
सरल सुझाव: कसरी लुगा को सी गर्न सिक्न
को ढलान मा घरहरू परियोजनाहरू: विशेष गरी छिंडीमा र भूमि तल
कसरी एक स्वस्थ तरिकामा ठीक गर्न: समीक्षा
Dispelling चर्च विवाह: यो सम्भव छ वा छैन
बस 21 दिनमा आलस्य कसरी हटाउन
सोनी C2105 Xperia एल - मोडेल, ग्राहक समीक्षा र विशेषज्ञ को सिंहावलोकन
फर्नान्डो Torres, चेल्सी वा संरचना पर्ची
नोट "नमूना" को नमूना। चर्चले "स्वास्थ्यमा" र "विश्राममा"
स्ट्रबेरी Kurd: सामाग्री, नुस्खा पकाउने रहस्य
कोणात्मक फिड संग शौचालय कचौरा: तस्बिर, आकार
घाँटी र काँध लागि मालिश तकिया: समीक्षा, फोटो, contraindications
पाइक लागि जाडो: zherlitsy आफ्नै हात
Alexei Ostrovsky: जीवनी र फोटो